Portal:Soomaaliya - Wikipedia
Tirada maqaalada hadda ku jira ee Wikipedia Soomaaliga kuna saabsan Soomaaliya waa : 6 Maqaal.
Soomaaliya, waxaa loo yaqaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa horay loo oranjiray Jamahuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed, waa Dal dhaca Geeska Afrika. waxay xad kala wadaagtaa woqooyi galbeed Jabuuti, Kiinya Koonfur Galbeed, Gacanka Cadmeed Yemen woqooyi Badweynta Hindiya bariga iyo Itoobiya Galbeedka.
Dheeraad ku saabsan Soomaaliya...
Maqaal Gaar Ah
Dadka Soomaaliyeed (Af-Carabi: الصوماليون) waa dad ku nool Geeska Afrika Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Waxayna ku hadlaan Af-Soomaali Waana mid kamid ah Luqadaha Kushitiga Faraceeda Afro Aasiya.
Soomaalida Waxaa kala qaybiyey Gumeysigii qarnigii 19aad, kaas oo ukala qaybsaday 5 qaybood oo Kala ah:
Talyaani Oo haystay Koofurta Soomaaliya
Ingiriiska Oo haystay Wuqooyiga Soomaaliya (Somalilan)
Faransiiska Oo haystay Xeebta Soomaaliya (Jabuuti)
Itoobiya + Ingiriiska Oo haystay Soomaali Galbeed (Ogaadeenya)
Kenya + Ingiriiska Oo Haystay NFD
Loona yaqaan Soomaaliweyn
Waxay wada leeyihiin dhaqan iyo luqad Ay wadaagaan. Somalida waxay ku kala nool yihiin, qurbaha iyo dhulka Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliweyn .
dheeraad sii aqri...
Muqdisho (Af-Taliyaani : Mogadiscio, Carabi: مقديشو, Xamar, Carabi: حَمَر) waa caasimada Jamhuuriyadda Fedraalka Soomaaliya, waxa ayna ku taalaa galbeedka Badweynta Hindiya, waa magaalo qurux badan oo indhuhu soo jiitaan, oo aay badweynta Hindiya kaga wareegsan tahay sadax jiho.
Gen. Daauud Cabdulle Xirsi (1924-1965) wuxuu ahaa Janaraalkii ugu horeeye ee yeelato Soomaaliya isla markaasna ahaa taliyihii ugu horeeyey ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed. Janaraal Daauud wuxuu ku dhashay tuulada Mareeg ee ka tirsan gobolka Galguduud ee dalka Soomaaliya halkaas oo uu ku dhameeye aqoontiisa Qur'aanka asagoo da' yar ah. Mudo sanad ah asagoo ka shaqaynayaa xaafiiska Talyaaniga ee degmada Buuloburde ayuu wuxuu u gudbay magaalada Muqdisho, xoogaa kahor intaan la gaarin Dagaalkii Labaad ee Aduunyada. 1943dii wuxuu ku biiray Ciidamada Booliska ee Ingiriiska oo markaas hayste koonfurta Soomaaliya, Janaral Daauud waxaa uu ka gaare shaqadiisa ilaa barre (macalin) tababare ka ah Dugsiga Booliiska ee Xamarjajab.
Mashaariicda Bahwadaagta la ah
Dagaalkii xoraynta Soomaali Galbeed waxa uu ahaa dagaal dhexmaray somaliya iyo Itoobiya. Kaasoo u jeedada dagaalku u bilaabmay ay ahayd, khilaaf kataagnaa gobolka soomaalida ee Itoobiya amaba ogaden ee Soomaalida utaqaan Soomaali Galbeed. kadib markii ay fashilmeen dhamaan wada hadaladii siyaasadeed ee ku saabsanaa arinta gobolka ogaden ayaa ciidamada somaliya waxa ay weerar ku qaadeen wadanka Itoobiya.
Todobaadkii ugu horeeyayba waxa ciidamada soomaaliya u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan bartamaha iyo koonfurta gobolka Soomaali Galbeed.
Intii dagaalku socday waxa ay ciidamada soomaaliya marba marka kadanbaysa kasoo hooynayeen guulo isdaba joog ah waxa ay ciidamada soomaaliya eryanayeen ciidamada itoobiya ilaa ay laga gaaro goobta looyaqaano Sidamo.
Markii la gaadhay sebtembar sanadkii 1977 ciidamada soomaaliya waxa ay gacanta ku dhigeen dhamaan gobolka Soomaali Galbeed waxa kale oo ay qabsadeen goobo iyo magaalooyin muhima oo kabaxsan gobolka.
Kadib markii ciidamada soomaaliya ay go'doon galiyeen magaalda Harar waxa dagaalka soogalay oo kuuba isisoo garabtaagay wadankii la odhan jiray Midowga Sofiyet.
Sofiyeedku waxa uu taakulo dhanwalba leh siiyay ciidamada iyo dawladda Itoobiya, waxa kale oo uu sofiyeedku ugu deeqay itoobiya inkabadan 18,000 oo askari oo kayimi wadanka kuuba, taaso oo keentaya in ciidamadii soomaaliya dib loosoo jabiyo laguna qasbo in ay kabaxaan gobolka Soomaali Galbeed.
Oraah Xul Ah
Portal:Soomaaliya/Oraah Xul Ah
Wararka BBC: Somali
Xarunta filasha lawada wadaago
Oraaho caan ah lana soo wariyey
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Soomaaliya&oldid=212550"
Last edited on 17 Juun 2021, at 20:03
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Juun 2021, marka ee eheed 20:03.